Albayrak oo maamulaysa dekadda Muqdisho - BBC News Somali
Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta rasmi ah shaaca uga qaaday in maamulka Dekadda Muqdisho ay ku wareejisay shirkad Turkish ah oo la yiraahdo Albayrak. Munaasabadda Xilwareejinta oo ay ka qeybgaleen madax ka tirsan dowladda iyo shaqaalaha dekadda ayaa waxa ay ka dhacday gudaha Dekadda. Waxaa goob joog ka ahaa xafladda wariyaha BBC ee Muqdisho Maxamed Ibrahim Mucallimu.
Wasiirka Dekadaha iyo Gaadiidka Yusuf Macalin Baadiyow, oo ka hadlay xil wareejinta ayaa sheegay inay dowladda heshiis la gashay shirkada Albayrak inay maamusho dekada iyo inay dowladda yeelan doonto boqolkiiba konton iyo shan lacagta soo gasha dekadda. Albayrak ayaa yeelan doonta boqolkiiba afartan iyo shan.
Wasiirka ayaa sheegay in Soomaaliya aysan haysan lacag ay ku casriyayso dekadda, sidaas darteed ayuu yiri lagama maar maan ayay noqotay in shirkada Turkiga lagu wareejiyo maamulka dekadda si ay u hormariso oo ula tartanto dekadaha gobolka.
Wuxuu sheegay in la balaarin doono dekadda, maraakiib waawayna ay ku soo xiran doonto iyo in dhaqaale badan ay ka heli doonaan iyagoo dekad u noqon doona dalalka aan dekadaha lahayn.